Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.6.2 anshax ahaan naqshaddaada: beddel, nadiifin, oo yaree
Dhig tijaabo dheeraad ah oo dadnimo by bedelay tijaabo la cilmiga non-tijaabo, hagaajinaayo daweynta, iyo yaraynta tirada ka qayb galayaasha.
Qeybta labaad ee talo-bixinta ee aan jeclaan lahaa in aan soo bandhigo oo ku saabsan samaynta tijaabooyinka tijaabada ah ayaa ka baaraandegaya anshaxa. Iyadoo tijaabinta Deegaanka iyo Van de Rijt ee barnstars ee ku yaala Wikipedia, qiimaha hoos u dhaca macnaheedu waa in anshaxa uu noqon doono qayb muhiim ah oo ka mid ah naqshadeynta cilmi-baarista. Marka laga reebo qaabdhismeedka asluubta ee hagaya maadooyinka aadanaha cilmi baarista ah ee ku sharxi doona cutubka 6, cilmi-baarayaasha sameeya tijaabooyinka dijitaalka ayaa sidoo kale ku soo jiidi kara fikradaha anshaxa ee ilaha kala duwan: mabaadiida asaasiga ah ee loo sameeyay si loogu hago tijaabooyinka ku lug leh xayawaanka. Gaar ahaan, buug-gacmeedka " Principles of Exercise Technique" , Russell and Burch (1959) soo jeediyay seddex mabda 'oo ah in ay hagaan cilmi-baarista xoolaha: beddelaan, nadiifiyaan, oo yareeyaan. Waxaan jeclaan lahaa in aan soo jeediyo in seddexdaas R ee loo isticmaali karo-qaab modified waxoogaa ah-si loo hagaajiyo naqshadaynta tijaabooyinka dadka. Khaas ahaan,
Beddel: Isticmaal tijaabooyinka leh habab aan haboonayn haddii ay macquul tahay.
Dhiirrigalin: Dib u celi daaweynta si aad uga dhigto mid aan dhib lahayn.
Iska yaree: Iska yaree tirada ka qaybgalayaasha tijaabadaada sida ugu macquulsan.
Si loo soo saaro seddexdaas R ee la taaban karo isla markaana tusi sida ay u suurtageli karto inay u horseedaan naqshad fiican oo aad u bini-aadamin ah, waxaan ku sharxi doonaa tijaabinta goobta internetka ee abuurtay doodda anshaxa. Ka dib, waxaan ku sharxi doonaa sida ay saddexda R u soo jeediyaan isbeddello la taaban karo oo wax ku ool ah ee naqshada tijaabada.
Mid ka mid ah tijaabooyinka dareenka ugu caansan ee laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa Adam Kramer, Jamie Guillroy iyo Jeffrey Hancock (2014) , waxaana loo yeeray "Fikirka Naxariista." Daraasadda waxay ka dhacdey facebook waxayna ku dhiirigelisay isku-dhafan cilmi iyo Su'aalaha dhabta ah. Waqtigaas, qaabka ugu haboon ee dadka isticmaala Facebook waxay ahayd News Feed, oo ah qaab algorithmically ah oo lagu soo bandhigay bog cusub ee Facebook ee saaxiibada Facebook. Qaar ka mid ah caqabadaha Facebook ayaa soo jeediyay in sababtoo ah wargeyska News Feed ayaa inta badan saaxiibo muujinaya saaxiibadooda ugu dambeysa - waxay keeni kartaa in dadka isticmaala dareemaan murugo sababtoo ah noloshooda waxay u muuqatay mid aad u xiiso badan. Dhanka kale, malaha saameyntani waa dhab ka soo horjeeda: waxaa laga yaabaa inaad aragtid saaxiibkaa waqti wanaagsan oo aad ku farxi karto. Si looga hadlo tirooyinkaan tartanka ah-iyo si loo horumariyo fahamkeenna sida shucuurta qofku u saameynayso shucuurta saaxiibadeed - Kramer iyo asxaabtooyadu waxay tijaabiyeen tijaabo. Waxay u dhigeen qiyaastii 700,000 oo qof afar kooxood hal toddobaad: "koox-celin-yar", kuwaas oo ay ku qoranyihiin erayo xun (tusaale, "murugo") ayaa si aan kala sooc laheyn looga soo horjeeday "News Feed"; oo ah koox "karti-gaabis ah" oo loogu talagalay kuwa ay ku qoran yihiin erayo sax ah (tusaale ahaan, "farxad") ayaa si khaldan loo xakumay; iyo laba kooxood oo kantarool. Kooxdii kantaroolka ahayd ee kooxda "negativity-reduced", ayaa si khaldan loo xayiray isla heer la mid ah kooxda "dhimista-yar" laakiin iyada oo aan loo eegin mawduuca dareenka. Kooxdan kantaroolka ah ee kooxda "hoos u dhigista" ayaa la dhisay qaab la mid ah. Naqshadeynta tijaabadani waxay muujineysaa in kooxda ku habboon ee ma'aha ahayn had iyo jeer isbeddel la'aan. Taas, mararka qaarkood, kooxdu waxay helaysaa daaweyn si loo abuuro isbarbardhiga saxda ah ee su'aasha cilmi-baarista. Xaaladaha oo idil, fariimaha laga xannibay "Feed Feed" ayaa wali la heli karaa dadka isticmaalaya qaybaha kale ee bogga Facebook.
Kramer iyo asxaabtiisuba waxay ogaadeen in ka qaybgalayaasha xaaladdoodu hoos u dhacday, boqolkiiba erayada saxda ah ee ku saabsan xaaladooda xaaladoodu hoos u dhacday iyo boqolkiiba ereyada taban ayaa kordhay. Dhinaca kale, ka qaybgalayaasha xaalad xumi-dhimis, boqolkiiba erayada saxda ah ayaa kordhay iyo in ereyada taban ay hoos u dhaceen (Tirada 4.24). Hase yeeshee, saameyntani waxay ahaayeen kuwo aad u yaryar: farqiga ereyada wanaagsan iyo kuwa xunba u dhexeeya daaweynta iyo kontoroolka waxay ku dhawaad ​​1 gaari oo ah 1,000 eray.
Jaantuska 4.24: Caddaynta niyad jabka (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) . Ka qaybqaatayaasha ku jira xaalad xumi-yar oo la yareeyey ayaa isticmaala erayada xun iyo erayo wanaagsan, iyo ka-qaybgalayaasha xaalad-celin-yaraa waxay adeegsadeen erayo xun oo erayo wanaagsan. Aqoonyahanadu waxay matalaan khaladaadka lagu qiyaasay Waxaa laga soo qaatay Kramer, Guillory, and Hancock (2014) , sawirka 1.
Ka hor inta aan laga hadlin qodobbada anshaxeed ee ay soo saartay tijaabadan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku sharaxo saddex arrimood oo cilmi-baaris ah iyada oo la adeegsanayo qaar ka mid ah fikradaha hore ee cutubka. Marka hore, ma cadda sida faahfaahinta dhabta ah ee tijaabadu ay ku xidhantahay sheegashooyinka aasaasiga ah; Si kale haddii loo dhigo, waxaa jira su'aalo ku saabsan sameynta saxsanaanta. Ma cadda in ereyada wanaagsan iyo kuwa xunba ay yihiin kuwo dhab ah oo muujinaya xaaladaha niyadeed ee kaqeybgalayaasha sababtoo ah (1) ma cadda in ereyada dadwaynaha ay yihiin calaamad muujinaysa shucuurtooda iyo (2) cad in farsameynta falanqaynta gaarka ah ee cilmi-baarayaasha ay isticmaalaan ay awood u leeyihiin in ay isku-kalsoonaadaan dareenkooda (Beasley and Mason 2015; Panger 2016) . Si kale haddii loo dhigo, waxaa laga yaabaa in ay jirto cabir xun oo ka mid ah calaamad muujinaysa. Tan labaad, naqshadeynta iyo falanqaynta tijaabadu wax uma sheegin wax ku saabsan cidda aadka u saameeysay (tusaale ahaan, ma jirto falanqeyn ku saabsan hiddaha daaweynta saamaynta daaweynta) iyo waxa uu macnuhu noqon karo. Xaaladdan, cilmi-baarayaashu waxay lahaayeen macluumaad badan oo ku saabsan ka qaybgalayaasha, laakiin waxay si dhab ah loola dhaqmey sidii widgets ee falanqaynta. Saddexaad, cabbirka saamaynta ee tijaabadan ayaa aad u yar; farqiga u dhexeeya xaaladaha daaweynta iyo xakamaynta waxay kudhisan yihiin 1 qiyaas ahaan 1,000 eray. Warqaddooda, Kramer iyo jaaliyaddooduba waxay sameeyaan kiis ay saameyn ku yeeshaan cabbirkan muhiimka ah sababtoo ah boqolaal malaayiin dad ah ayaa gelaya maalin walba. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku doodaan in xitaa haddii saameyntu ay yar tahay qof kasta, waxay ku badan yihiin wadar ahaan. Xitaa haddii aad tahay inaad aqbalo dooddan, weli wali ma cadda haddii saameynta cabbirkan ay muhiim u tahay su'aasha guud ee guud ee ku saabsan faafinta dareenka (Prentice and Miller 1992) .
Marka laga reebo su'aalahan sayniska ah, maalmo yar kadib markii la daabacay wargeyska Akadeemiyada Qaranka ee Sayniska , waxaa jiray dareen weyn oo ka soo baxay labada cilmi-baarayaal iyo saxaafadda (Waxaan sharxi doonaa doodaha dooddan ku jirta faahfaahin dheeraad ah ee cutubka 6 ). Arrimaha ku xusan dooddan waxay keeneen joornaalka in ay soo daabacaan faallo nuqul ah oo "cabasho ah" oo ku saabsan anshaxa iyo habka dib u eegista anshaxa ee cilmi-baarista (Verma 2014) .
Iyadoo la tixgelinayo astaamaha ku saabsan shucuurta caadifadda, waxaan hadda jeclaan lahaa in aan muujiyo in saddexda R ay soo jeedin karaan horumarin dhab ah oo wax ku ool ah ee daraasad dhab ah (wax kasta oo aad shakhsi ahaan ka fekeri karto anshaxa tijaabadan gaarka ah). R-da koowaad waa la beddelayaa : cilmi-baarayaashu waa inay raadsadaan inay tijaabiyaan tijaabooyinka farsamooyinka khatarta ah iyo kuwa khatarta ah, haddii ay suurtogal tahay. Tusaale ahaan, halkii ay ka shaqayn lahayd tijaabin la xakameeyey, cilmi-baarayaashu waxay isticmaali karaan tijaabin dabiici ah . Sida lagu sharraxay cutubka 2, tijaabooyinka dabiiciga ah waa xaalado ay wax ka dhacaan adduunka oo qiyaasaya kala-soocida daaweynta (tusaale ahaan, bakhtiyaa-nasiib si loo go'aamiyo qofka lagu qorayo ciidanka). Faa'iidada anshaxa ee tijaabada dabiiciga ah waa in cilmi-baaristu aysan ahayn in la soo gudbiyo daaweynta: bay'adu waxay adiga kuu tahay. Tusaale ahaan, ku dhowaadba si siman u tijaabinta tijaabada 'Emotional Contagion', Lorenzo Coviello et al. (2014) waxay ka faa'iidaysteen waxa loogu yeeri lahaa tijaabada dabiiciga ah ee Dabiiciga ah. Coviello iyo asxaabtooyu waxay ogaadeen in dadku ay erayo xun oo erayo xun ku yeeshaan iyo erayo wanaagsan oo laga yaabo in maalmaha ay da'ayaan. Sidaa daraadeed, adigoo isticmaalaya kala duwanaanta kala duwan ee cimilada, waxay awoodeen inay wax ka bartaan saameynta isbeddelada ee Feed Feed (News Feed) iyada oo aan loo baahnayn in wax laga qabto. Waxay ahayd sidii cimiladu u socotay tijaabadooda. Faahfaahinta qaabsocodkoodu waa mid aad u yara adag, laakiin qodobbada ugu muhiimsan ee ujeedooyinkayagu waa halkan iyadoo la adeegsanayo tijaabin dabiiciga ah, Coviello iyo asxaabtu waxay awoodeen inay wax ka bartaan faafidda shucuurta iyada oo aan loo baahnayn inay tijaabiyaan tijaabadooda.
Qodobbada labaad ee saddexda Rs waa mid caddaynaya : cilmi-baarayaashu waa inay raadiyaan inay ku nadiifiyaan daaweyntooda si ay u noqdaan kuwo aan dhib lahayn. Tusaale ahaan, halkii laga joojin lahaa maadada ama wax xun, cilmi-baarayaashu waxay awood u yeelan lahaayeen in ay xoojiyaan waxyaallaha wanaagsan ama wax xun. Naqshaddan xoojinta ah waxay bedeli lahayd niyaddeeda dareenka ee ka qaybgalayaasha 'News Feeds', laakiin waxay ka hadli lahayd mid ka mid ah walaacyada sheegaya dhaleeceynta muujisay: in tijaabooyinka laga yaabo inay sababeen ka qaybgalayaashu inay ka maqnaato macluumaad muhiim ah ee ku saabsan wargeyska Feed Feed. Iyadoo naqshadeynta uu isticmaalay Kramer iyo jalayaashiisa, fariin muhiim ah ayaa u muuqda in la xakameeyo mid aan ahayn. Si kastaba ha noqotee, qaab-dhismeed xeel dheer, farriimaha soo noqon lahaa waxay noqon lahaayeen kuwo aan muhiim ahayn.
Ugu dambayntii, saddexda R waa la yareeyaa : cilmi-baarayaashu waa inay raadiyaan inay yareeyaan tirada ka qaybgalayaasha ee tijaabadooda ugu yar ee loo baahan yahay si ay u gaaraan ujeedadooda cilmi ahaaneed. Dhibaatooyinka analogga ah, tani waxay si caadi ah u dhacday sababtoo ah kharashka badan ee ka-qaybgalayaasha. Laakiin tijaabooyinka dijitaalka ah, gaar ahaan kuwa kharashka ku baxa eber, cilmi-baarayaashu ma soo wajahaan caqabado kharashka ah ee cabbirka tijaabadooda, tani waxay leedahay awood ay u horseedi karto tijaabooyin aan loo baahnayn.
Tusaale ahaan, Kramer iyo asxaabtoodu waxay isticmaali karaan macluumaadka daaweynta kahor ee kaqaybgalayaashooda - sida daaweynta dhajinta daaweynta kahor - si ay u falanqayntoodu ufiiriyaan. Marka loo eego saamiga erayada saxda ah ee xaaladaha daaweynta iyo xakamaynta, Kramer iyo asxaabtu waxay isbarbar dhigi lahaayeen isbedelka saamiga erayada saxda ah ee u dhaxeeya xaaladaha; habka mararka qaarkood loo yaqaan naqshad isku dhafan (sawirka 4.5) iyo mararka qaar loogu yeero qiyaasaha faraqa u dhexeeya. Taasi waa, ka qaybgale kasta, cilmi ku abuuray yaabaa score isbedel (dabeecad-daweynta post \_(-\_) dabeecad-daaweyn pre) ka dibna marka la barbar dhigo tirooyinka isbedel ka qaybgalayaasha in xaaladaha daaweynta iyo gacanta ay. Habka farqiga u dhexeeya ee farqiga u dhexeeya ayaa si xamaasad leh u tira badan, taas oo macnaheedu yahay in cilmi-baarayaashu ay isku kalsoonaan karaan isku-kalsoonida tirakoobka iyada oo la adeegsanayo shaybaarro yar yar
Iyadoo aan haysanin macluumaadka qoyaanka, way adagtahay in la ogaado inta ay le'egtahay wax-ku-oolnimada qiyaasaha isbeddelka kala duwanaanshaha ee ku dhici lahaa kiiskan. Laakiin waxaan eegi karnaa tijaabooyinka kale ee la xidhiidha fikrado adag. Deng et al. (2013) ayaa sheegay in iyaga oo isticmaalaya qaabka kala duwanaanshaha qiyaasaha farqiga u dhexeeya, waxay awoodeen inay yareeyaan kala-galka qiyaasoodkooda ilaa qiyaastii 50% saddexda tijaabo oo kala duwan; Natiijooyin isku mid ah ayaa laga soo xigtay Xie and Aurisset (2016) . Kala dhimista kala-galka 50% macnaheedu waa in cilmi-baadhayaasha Cudurka Qaaxada ee laga yaabo in ay awoodaan in ay yareeyaan tijaabadooda qeybta nuska ah haddii ay isticmaaleen hab falanqayn oo yar. Si kale haddii loo dhigo, isbeddel yar oo falanqaynta ah, 350,000 qof ayaa laga yaabaa inay ka qeyb qaadatay tijaabinta.
Waqtigan, waxaa laga yaabaa inaad ka fekerto sababta ay cilmi-baadhayaashu u-daryeelayaan haddii 350,000 oo qof ay kufilan yihiin Maqnaanshaha Dabiiciga ah iyada oo aan loo baahnayn. Waxaa jira laba muuqaal oo khaas ah oo ku saabsan Dareemaha Cadaadiska oo ka walaacaya cabbirka xad-dhaafka ah ee ku habboon, iyo sifooyinkaas waxaa lagu wadaagaa tijaabooyin badan oo sahlan: (1) waxaa jira wax shaki ah oo ku saabsan haddii tijaabadu keeni karto waxyeello ugu yaraan ka-qaybgalayaasha qaar iyo (2) ma ahayn mid ikhtiyaari ah. Waxay u muuqataa macquul inaad isku daydo inaad tijaabiso tijaabooyin kuwaas oo leh sifooyinkan sida ugu macquulsan.
Si aad u cadeeysid, rabitaanka lagu yareeyo xajmigaaga tijaabadaada macnaheedu maaha inaadan kari doonin inaad tijaabiso tijaabo kharash badan oo eber ah. Taas macnaheedu waa in tijaabooyinkaagu aysan aheyn mid ka weyn kuwa aad u baahan tahay si aad u gaarto hadafkaaga sayniska. Mid ka mid ah habka muhiimka ah ee loo hubiyo in tijaabinta si haboon loo kala saaro waa in la sameeyo falanqayn awood (Cohen 1988) . In da'da analooga, cilmi-baarayaasha guud ahaan waxay sameeyeen falanqayn awoodeed si loo hubiyo in daraasaddoodu aysan ahayn mid aad u yar (ie, hoos-u-taakuleyn). Hadda, si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waa inay sameeyaan falanqayn awoodeed si ay u hubiyaan in daraasaddoodu aysan ahayn mid aad u weyn (sida, kororka).
Gebogebada, saddexda R ee-beddelidda, nadiifinta, iyo hoos u dhigista mabaadiida ka caawin kara cilmi-baarayaasha inay dhisaan anshax ahaan naqshadahooda tijaabada ah. Dabcan, mid kasta oo ka mid ah isbeddelada suurtagalka ah ee faafinta shucuurta ayaa soo bandhigaya ganacsiyada. Tusaale ahaan, caddaynta tijaabada dabiiciga ah had iyo jeer ma aha mid nadiif ah sida tan laga soo qaatay tijaabooyin kala duwan, iyo xoojinta maaddooyinka laga yaabo inay noqdaan kuwo si adag u adag in la hirgeliyo inta ka horeysa xayiraadda content. Sidaa darteed, ujeedada soo jeedinta isbeddelladani maaha inay noqoto mid labaad oo qiyaasta go'aannada cilmi-baarayaasha kale. Taas, waxay ahayd in la muujiyo sida loo isticmaali karo saddexda R ee xaalad dhab ah. Dhab ahaan, arrinta ganacsiyada ayaa ka soo baxa wakhti kasta oo la xidhiidha naqshadaynta cilmi-baarista, iyo dijitaalka-da, kuwan ayaa ganacsiyadu sii kordhinayaan tixgelinta anshaxa. Later, cutubka 6, waxaan soo bandhigi doonaa mabaadi'da iyo habdhaqanka anshaxa ee ka caawin kara cilmi-baadhayaasha inay fahmaan oo ka wadahadlaan ganacsiyadaas.